(အိုင်ဗရီကို့စ်ထ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဆောင်ပုဒ်: ညီညွတ်ခြင်းနှင့် စည်းကမ်းရှိခြင်း
အိုင်ဗရီကို့စ်ထ်သမ္မတနိုင်ငံ ၏ အင်္ဂလိပ်အမည်မှာ Ivory Coast ဖြစ်သည်။ အာဖရိက အနောက်ပိုင်းရှိ တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်သည်။  ဧရိယာစတုရန်းကီလိုမီတာပေါင်း (၃၂၂,၄၆၂) ရှိသည်။ အိမ်နီးချင်း နယ်မြေထိစပ်နေသော နိုင်ငံများမှာ လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ၊ ဂီနီနိုင်ငံ၊ မာလီနိုင်ငံ၊ ဘာကီးနားဖားဆိုနိုင်ငံ နှင့် ဂါနာနိုင်ငံတို့ဖြစ်သည်။ တောင်ဘက်တွင် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၊ ဂီနီပင်လယ်ကွေ့ (Gulf of Guinea) ကမ်းရိုးတန်း ရှိသည်။ ၁၉၉၈ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လူဦးရေ ၁၅,၃၆၆,၆၇၂ ရှိသည်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် ၂၀,၆၁၇,၀၆၈ ယောက် ရှိသည်။ 
၁၉၆၀၊ ဩဂုတ်လ (၇)ရက်နေ့တွင် လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။ ၁၉၆၀မှ ၁၉၉၃အထိ တိုင်းပြည်ကို Félix Houphouët-Boigny မှ ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အိမ်နီးချင်း အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံများနှင့် စီးပွားရေး နိုင်ငံရေးတွင် နီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။ အခြားတစ်ဘက်တွင်လည်း ပြင်သစ်လို ဥရောပနိုင်ငံများနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက် ရှိသည်။ Félix Houphouët-Boigny အစိုးရ ပြုတ်ကျပြီးနောက်တွင် ၁၉၉၉ နှင့် ၂၀၀၁ တွင် အာဏာသိမ်းမှု (၂)ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ပြည်တွင်းစစ်လည်း ဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်။  ရွေးကောက်ပွဲနှင့်  နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များကြောင့် အစိုးရနှင့် သူပုန်များကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိခဲ့သည်။  အိုင်ဗရီကို့စ်ထ်သည် သမ္မတတွင် အာဏာအပြည့်ရှိသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ မြို့တော်မှာ ယာမူဆူကရို (Yamoussoukro) ဖြစ်ပြီး အကြီးဆုံးမြို့မှာ ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်သော အဘိဂျန် (Abidjan) ဖြစ်သည်။ တိုင်းဒေသ (Regions) ၁၉ခုနှင့် ဌာန (departments) (၈၁)ခု အဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အစ္စလမ္မစ်ကွန်ဖရင့်အဖွဲ့ (Organisation of the Islamic Conference)၊ အာဖရိကသမဂ္ဂ၊ La Francophonie၊ Latin Union နှင့် အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံများစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Economic Community of West African States) နှင့် တောင်အတ္တလန္တိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဇုန် (South Atlantic Peace and Cooperation Zone) တို့၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
↑ ၄.၀ ၄.၁ "Côte d'Ivoire", [[The World Factbook]], CIA Directorate of Intelligence, 24 July 2008, retrieved 8 August 2008 Wikilink embedded in URL title (help).
↑ Library of Congress Country Studies, Library of Congress, November 1988, retrieved 11 April 2009
↑ (ပြင်သစ်) "Loi n° 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire", Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire 42 (30),3August 2000: 529–538, retrieved7August 2008 .
↑ Background Note: Cote d'Ivoire, United States Department of State, July 2008, retrieved7August 2008 .
↑ (ပြင်သစ်) Accord politique de Ouagadougou, Presidency of the Republic of Côte d'Ivoire,4March 2007, retrieved7August 2008
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိုင်ဗရီကို့စ်နိုင်ငံ&oldid=393391" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ မတ် ၂၀၁၈၊ ၀၄:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။